Kaningi kuyenzeka ukuthi umuntu akanalo izikimu efakwe ngokwakhona, nokuthi ulayisha ibalazwe navigation, - akazi. Nokho, kube nzima Uma unganakile, Nokho, uyavuma, abanye amakhono zobuchwepheshe namanje edingekayo.
Ngakho, zisuka nje, yebo, kudingeka idivayisi navigation ngokwayo ngesofthiwe isivele ifakiwe. Amamephu zingabekwa ngezindlela eziningana.
Esokuqala futhi enokwethenjelwa kakhulu - cela umngani-Unicode ukwenza umsebenzi wakho. Isiphukuphuku kuleli cala, kungabikho muntu. Umngane wakho uzokwenza konke kulungile, kodwa namanje khulula.
Indlela yesibili - ukufunda indlela ukulanda amabalazwe ngqo itilosi esitolo. Lolu khetho Yiqiniso, akukubi, kodwa ngokuvamile abathengi abavamile kufanele ubhekane ukuntuleka ukuqeqeshwa nabathengisi abangagcini nje ukuletha version edingekayo amakhadi, kodwa kuyoletha idivaysi ukungasebenzi.
Indlela yesithathu - ukusetha konke mathupha. Kulokhu, izinkinga ezingaba khona futhi ukwehluleka ngeke kuphela ukusola, kodwa wena ngeke ukuthuthukisa ukuphathwa amakhono zobuchwepheshe.
Cabanga thina, eqinisweni, indlela yesithathu, kusukela kuqala ezimbili ngokungaqondile kuphela ohlobene nawe. Isinyathelo sokuqala ukuhlola version efakwe isofthiwe kudivayisi. Uma usuvele eyanyatheliswa buyekeza, uhlelo izokwazisa ngalokhu, bese kudingeka thwebula futhi kukhishwe ifayela oyifunayo. Lokhu kwenziwa ngokuzenzakalelayo, ngakho-ke sasingekho isidingo sokuba bafunde yimuphi imiyalelo "Indlela ubuyekeze itilosi Navitel".
Ngaphezu kwalokho, empeleni, ulanda ibalazwe okudingayo. Ukuze izinguqulo isicelo kuphela amakhadi ofanelekile isandiso ".nm3" - ngaphambili angasasekelwa, nesiphambeko kuzovezwa uma efakiwe.
Ukukhipha kulayishiwe kusuka amafayela indawo ibalazwe etholakala kokubili izindlela othomathikhi futhi mathupha. iziyalezo eziqondile ukuchaza indlela yokulanda ihambelana unit wakho akekho, ngoba silula. Uzodinga ukuxhuma idivayisi kwikhompyutha ekhaya yakho naku laptop yakho bese ukopisha amafayela imephu ukuze lwemibhalo oyifunayo. Ngemva kwalokho, nqamula itilosi futhi phansi usebenzisa inkinobho, isendaweni eyodwa ezinhlangothini zalo.
Ngemva kabusha idivayisi ekhadini imenyu kufanele kube into entsha elihambisana ifayela entsha osanda ozokopishele kwidivaysi yakho. Uma lokhu kungenzeki, kunconywa waphinda kabusha ufunde isihloko ukuqonda lapho wenza iphutha, ngoba wonke umuntu angakwazi ngokushesha baqonde indlela ukulanda amabalazwe iyunithi yakho, noma ulula.
Ngakho, uma amaphutha udinga ukuhlola izinto ezimbalwa. Okokuqala, kuze kube sekupheleni kungakhathaliseki osikopishile ifayela ibalazwe kwimemori isiphequluli, ngoba ngisho ne kancane ukuphahlazeka nomthelela kuyoba engathandeki. Okwesibili, noma ngabe version isofthiwe kohlelo ifayela. Okwesithathu: ikhadi ilayisensi uma ulanda kusuka kusayithi. Uma okungenani yezinto encishisiwe eqinisweni, kufanele uphinde uhlole konke bese uzama ukufaka ikhadi futhi. Ngokuvamile, Ngakho-ke wanquma 99% wonke amaphutha.
Ngithemba ukuthi akusiza ngazo, lesi sihloko futhi manje wazi kahle ukuthi ukulanda mephu itilosi.
Kungani iphupho izimbali ezinephunga elimnandi? ukutshela incwadi iphupho
Kanonersky Isiqhingi: amagama indawo, umlando, amathemba
Ukuphepha ibhande: yini okumelwe siyibheke lapho uthenga. ukwakhiwa Safety ibhande
Nephrectomy ngokwengxenye: inkomba, ukusebenza, ukuvuselelwa
Inzalo emva kocansi. Yini odinga ukuyazi?
Gargling ngoba umphimbo obuhlungu nezinye izifo emphinjeni
Hokkaido Island, Japan: incazelo, imininingwane, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza